SomaliTalk.com » 2011 » June » 13
Home » Archive Maalinta June 13th, 2011
Aarhus, Denmark: Bandhigga fursadaha waxbarasho ee Denmark
Waxaa ka dhacay magaalada aarhus ee caasimadda 2aad Dalkan Denmark , bandhig aan isagookale horey loo sameyn. Aad iyo aadna looga soo shaqeeyey. Bandhigan ayaa waxaa isku soo dubaridey urur dhalinyaro soomaaliyeed ee layiraahdo ururuka mideynta dhalinyarada soomaaliyeed ee MIDSOM ( www.midsom.dk ). Badhigaan ayaa waxaa lagu soo badhigayay Fursadaha waxbarasho ee ka jira dalka denmark. Ujeedooyinka...
Shacabkii waddaniga ahaa ee S.Y.L. waxay haddana doorteen hoggaamiyehooda cusub ee Farmaajo
Taariikhdu waa lama illoobaan,shacabkii Soomaaliyeed ee waddaniyiinta ahaa oo ku sugnaa gudaha iyo dibedda Soomaaliya kuna jiray halgan gobannimodoon ah waxay doorteen in uu xisbigooda waddaniga ahaa ee S.Y.L. uu hoggaamiyo u noqdo Xaaji Maxamed Xuseen, doorashadaasina waxay ku dhacday isagoo Xaajigu uu ku sugnaa dalka Masar,maantana shacabka Soomaaliyed ee waddaniyiinta ah kuna sugan dalka gudihiisa...
Muxuu keeni karaa kacdoonka dhalinyarada soomaaliyeed ee sagaalka jun???
Tan iyo markii ay soo baxeen wararka sheegaya heshiiska ay kugaareen magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda, kooxaha iskukhilaafsan siyaasadda soomaaliya waa guddoomiyaha barrlamaanka Shariif sakiin iyo shariif Jooker oo ah madaxweynaha dawladda KMG ee soomaaliya .Heshiiskaas oo dhigaayey qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen 1- In doorashada Madaxweynaha, Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa...
Dabcan sida daawadu u leedahay dhinac dawo ah ayay u leedahay dhinac cudur wata sida markaad u isticmaasho cudur aan loogu tala galin ama in ka badan intii loogu talagalay, saas oo kale sheeko walba waxa ay ledahay dhinac kale oo aan ahayn kan muuqda. Marka hore waxaan ugu hanbalyaynayaa dadweynaha reer muqdisho biseylka siyasadeed ee ay muujiyeen markii ay si soomaali nimo ah oo aan ahayn nin jeclaysi...